रामबहादुर बमजनको आश्रम के छ ? यस्तो छ सत्य तथ्य (भिडियोसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १ आईतवार, ०३:०६
रामबहादुर बमजनको आश्रम के छ ? यस्तो छ सत्य तथ्य (भिडियोसहित)
२०७५ पुष २४ गते प्रकाशित, l १९:४९
काठमाण्डौ । मान्छे बेपत्ता पारेको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया सकिएपछि लिटल बुद्ध’ नामले चिनिएका रामबहादुर बमजनमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
हराएका व्यक्तिका परिवारहरु तथा आफु बमजनबाट बलात्कृत भएको भन्ने आरोप लगाउनेको कुरा सुन्ने हो भने उनी भगबानको कुनै स्वरुप नभई सामान्य युवा तर हुन् । र असामान्य यौन पिपाशु र मान्छे व्यपक्ता पार्ने व्यक्ति हुन् । उनको आश्रममा अपराधिक घटना भउका हुन की हैनन् भन्ने प्रंहरी अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
प्रहरीले बम्जनको शिविरको पुरै क्षेत्रमा खानतलासी गर्नुका साथै शंकास्पद स्थानमा खनेर हेरेको छ । तर, शव वा कंकाल केही भेटिएको छैन । सबै खनेर हेरेका भएपनि सानो हड्डी कुहिए पनि ठुला हडडी भेटिनु पर्ने हो तर, त्यो पनि भेटिएन । सञ्चलालको हत्या भएको हल्ला चलेपछि बम्जनका समर्थकले शव गाडेको ठाउबाट कंकाल तथा हड्डी उत्खखन गरेर अन्यत्र लगेर जलाएको हुनसक्छ भन्ने प्रहरीको अनुमान छ । प्रहरीको यो अनुमान र हामीले स्थलगत रिर्पाेटिङ गर्दा पाएको तथ्य मिल्न पुग्यो । प्रहरीले उत्खनन गरेको ठाउ भन्दा २ सय मिटर पर आश्रम पट्टि जंगलमा केही पोलिएको ठाउँ देखियो । आगो बालिएको ठांउँको छेउमा एउटा ‘जर्किन’ भेटियो । त्यो जर्किन किन र कसरी आयो भन्ने प्रश्न हामीले गर्दा, त्यसमा मट्तिेल ल्याइएको थियो भन्ने कुरा ति महिलाले हामीलाई भनिन् ।
उनले त्यति भन्दा स्थलगत अवलोकमा हामीसंगै आएका बमजन आश्रमकै अरुले मुख विगारे । ति महिलाले मट्टितेल ल्याएको भन्नु हुदैनथ्यो होला, त्यसैले अरुले कुनै रहस्य खुल्छ की भन्ने डरले होला अरुको अनुहारको भाव बदलियो । अरुको आशय बुझेपछि ति महिलाले तुरुन्तै आफ्नो बोलि सच्चाउने प्रयास गरिन् । मकैको ढोड जलाउन मट्टितेल प्रयोग गरिएको हो, अरु केही जलाइएको छैन । उनीहरुले भनेजस्तै तर त्यहाको अवस्था हेर्दा भने मकैको ढोड बालिएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
तर मट्टितेलको प्रयोग गरिएको भनेपछि शंका उव्जियो । हिउदको सुक्कखा समयमा सुकेको ढोड जलाउनको लागी किन मट्तिेल प्रयोग भयो ? त्यहा मकैको ढोडको आबरणमा अरु केही जलाईएको हुनसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । प्रहरीले आफुले उत्खन गर्नुअघि खाल्डोबाट मासु गलिसकेको शवबाट कंकाल हड्डीहरु निकालिएको हुनसक्ने दावी गरेको छ । त्यही कंकाल तथा हड्डी जलाउन मट्तिेल प्रयोग गरियो र त्यो थाहा नहोस भनेर मकैको ढोड त्यही जलाईयो भन्ने आशका गर्न सकिन्छ । किनकी आश्रमकै ति महिलाले त्यहा जलेका काठका मुडाहरु र मट्तिेलका जर्किन लुकाईन र ढोड मात्र जलाईएको जिकिर गरिन् ।
यदी त्यहा कंकाल वा हड्डी जलाईएको थिएन भने, ति महिला , त्यहा ठुला काठका दाउरा र जर्किन किन हटाईन् ।
उत्खनन् स्थलमै समेत स्थलगत अध्ययन गर्दा आश्रमका सञ्चालकहरु निक्कै डराएका देखिन्थे । हतार देखिएका उनीहरुको अनुहारको भावमा कुनै चैन थिएन । कहिले यता गएर कहिले उता गएर टेलिफोनमा कसैलाई त्यहा भएका गतिविधीहरुबारे जानकारी गराउने । प्रहरीले उत्खखन गरेको ठाँउमै उनीहरुसंग हामीले कुरा गर्दा केही झुठ लुकाउने प्रयत्न गरेको स्पष्ट देखियो । आश्रमका सञ्चालक मध्येका एक कमानसिंह लामा हुन् । नुवाकोटका उनी पंञ्चायतकाल देखिका राजनीतिज्ञ हुन् । नुवाकोटका पुराना राजनीतिज्ञ मध्येका एक रहेका उनी त्यहा प्रष्ठित व्यक्ति हुन् । पञ्चायतकालमा गाँउ पञ्चायत समेत बनेका थिए, कमानसिंह लामा । त्यतिबेला गाँउलेलाई न्याय दिलाएका उनले अहिले भने अाँखै आगाडी सत्य लुकाउन झुठ बोले ।
यसरी उनले प्रहरीले उत्खनन् गर्नुअघि त्यो जमिन खनिदै नखनिएको दावी गरे । तर ६ फिट मुनी केही काठका टुक्रा र चिलाउनेका कुहिएका गुडा भेटियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यो क्षेत्र पहिलै खनिएको थियो । केही गाडीएको थियो ।
बमजन आश्रमका व्यक्तिहरुले यसरी झुठ लुकाउन खाजेपनि यसरी पटक–पटक घटनाका प्रमाण फेला परेको छ । उनीहरुले भनेको र त्यहा देखिएको एक दुई वटा विषय फरक पर्नु संयोग मात्रै मान्न सकिएला । तर धेरै विषयहरु उनीहरुले दावी गरेभन्दा फरक देखिएकोले बमजन आश्रममा मान्छे बेपत्ता गरिएको आशंकालाई थप सुविधा दिएको छ ।
मानव बेपत्ता साबन्धी यस्तो गम्भिर आरोप रशंकास्पद गतिविधी तर्फ प्रहरीले अझ कडा निगरानी राखोस् । यदी बमजन आश्रममा आपराधीक गतिविधी भएकै हो भने कानुन बंबोजिम कारवाही होस् । यदी अपराधका घटना भएको होईन भने, उनीहरुमाथी लागेको आरोपबाट तत्काल मुक्ति दिलाईदिनुपर्छ ।
यदी उनीहरु निर्दाेश रहेछन् भने धेरै व्यक्तिले आश्था राख्ने धार्मीक व्यक्तिमाथीको आरोपले उनीहरुमाथी ठुलो अन्याय हुन पुग्छ । यसैले सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाउँस्थित बमजनको आश्रममा कुनै अस्वाभाविक घटना’ भएको टुङ्गोमा पुगेको प्रहरीले अनुसनधानलाई तत्काल टुगोमा पु¥याउदै साच्चै केभएको हो भन्ने अन्योलता हटाउनुपर्छ ।
सिन्धुपाल्चोकस्थित बमजनको आश्रममा पुगेर फर्किएपछि श्यामसुन्दर सुडासैनीको रिपोर्ट :
२०७५ पुष २४ गते सम्पादित l २०:३७